FALANQEYN CUSUB: Madaxweyne Farmaajo soo dhex-galkiisu muxuu kusoo kordhin doonaa Xaajada Cakiran ee Siyaasadda Muqdisho? – Puntlandtimes
FALANQEYN CUSUB: Madaxweyne Farmaajo soo dhex-galkiisu muxuu kusoo kordhin doonaa Xaajada Cakiran ee Siyaasadda Muqdisho?
MUQDISHO(P-TIMES)- Waabarigii hore ee Soomaaliya ayaa laga maqlay warbaahinta gudaha ee Muqdisho in uu xalay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la kulmay guddoonka is haya ee golaha Shacabka, oo ay isku raaceen in la hakiyo kalfadhi maanta 31 March loo balansanaa, kaas oo hubanti dhaxalsiin lahaa dawladda Faderaalka nabaro aysan si dhaw uga soo kabateen.
Madaxweynaha Soomaaliya wuxuu qaatay doorkiisa ku aadan in la joojiyo kulankaas, sidaas oo kale wuxuu dhabarka u xirtay in uu gabi ahaanba heshiisiin rasmi ah bilaabo, wuxuuna si toos ah ugu yeeray maanta Ra’iisulwasaaraha uu magacaabay ee Xasan Cali Kheyre, wuxuuna ka dalbaday in gabi ahanba la joojiyo arrimaha socda.
Madaxweyne Farmaajo wuxuu wajahayaa cadaadiskii ugu xumaa oo hadda taagan, waxaana ilaa hadda la marayaa marxalado adag oo siyaasadeed, si gaar ahna waxay ugu tahay tijaabadii ugu adkeyd ee soo marta, gaar ahaana sidda uu iskugu heyn karro xukuumad iyo baarlamaan dagaalamay oo si xun islu gaaray heerka ugu hooseeya.
Falanqeeyaasha siyaasaddu waxay rumeysan yihiin in ay fursado wanaagsan horyaaleen Madaxweynaha Soomaaliya, ugu dambeyntiina uu xalay garowsaday sidda loogu baahan yahay in uu kala dhexgalo golahan, oo markii hore la aaminsanaa in la safan yahay Laanta Fulinta.
Saadaalin fudud lagama bixin karro waxa socda, waxaana ilaa hadda meel adag isla gaaray labada kooxood ee dagaalamaya, waxaana qodobada ugu adag ah sidda loo maareynayo Mooshin waqtigiisii dhamaaday oo sharciyadda ku tuntay iyo Xukuumadda oo adeegsaday wax kasta oo uu dalkani lahaa.
Lama garanayo sidda ay ku dhici karto in garabyada Muudeey & Kheyre ay u aqbalayaan go`aanada kharaar ee uga imaanaya dhinaca Madaxweynaha Soomaaliya ee ah in gabi ahaanba meesha laga saaro mooshinka, isla markaasna la eego oo kaliya danaha Dastuuriga ah ee dalka, tasi waxay fursad wanaagsan u tahay Gudoomiye Jawaari iyo saaxiibadiisa siyaasadeed oo helay fursad wanaagsan.
Waxaan qabaa in aan la eegin kooxdee dani ugu jirtaa ee waa in laga fiiriyo danta waddanka siduu horay ugu socon lahaa meelna la dhigo isqabqabsiga oo cadowgeenu naga faa;iidaysto waa inay is cafiyaan oo aysan munaafiqiin ku sifoobin shacabku waxay idinka sugayaan adinkoo is gacan qaaday oo qalbiga isku sifeeyay Allah ayaan idiin baryeynaa inuu shaydaanka idinka dhex saaro.